Buddhism and Science | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London | Page 2
အကြောင်းအကျိုးပညာ(၂) ဒဿနိကဗေဒ၌ — The cause produces the effect. ဟူသော စကားရှိသည်။ အကြောင်းခံတရားသည် အကျိုးတရားကို ထုတ်လုပ်သည်။ The same cause produces the same effect. ဟူသော စကားရှိသည်။ တူညီသော အကြောင်းခံတရားတို့သည် တူညီသော အကျိုးတရားကို ထုတ်လုပ်ပေးတတ်သည်။ ဒဿနိကဗေဒ၌ အကြောင်းအကျိုး သဘောအမြင်သည် အထူးဆင်ခြင် လေ့လာဖွယ်ရာ ဖြစ်ကြောင်း တခမ်းတနား ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ အကြောင်းတရားသည် (Active) စွမ်းဆောင် … Continue reading →